भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: 2007
रु २२० प्रति किलोग्राम पर्ने छुर्पी अर्थात दुर्खाको स्वाद थाहा पाउन तपाईले राम्चे, रसुवा वरपर यसो चहार्नुपर्छ । अनि धुवामा सेकाईरहेको नकाटेको छुर्पि देख्दा मुखमा थुक नआउने त कुरै भएन !
Posted by Reality Bites, Nepal at 5:24 AM2comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 4:51 AM 1 comment:
बाटोमै केरा, सुन्तलाका बोक्रा देखि चाउ-चाउको खोल सबै फाल्ने नेपालीलाई यिनै बिदेशीहरुले उदाहरण दिन्छन कि फोहोर जताततै फाल्नु हुदैन ।त्रिसुली केहि दिन अघि रसुवाबाट फर्केका यि पर्यटकले बाटोमा देखिएको फोहोर फाल्ने बाल्टिन देखेपछि दौडेर उतै पुगे, केराको बोक्रा फाल्न । त्यो सोच हो , स्वच्छ , हराभरा नेपालको । तपाईले पनि केहि सोच्नु भो कि ?
Posted by Reality Bites, Nepal at 4:31 AM No comments:
रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेबाट देखिएको यो लाङ्टाङ् हिमालको सुन्दर द्रिश्यहरु हेर्दै जब काठमाण्डौ पुगियो, साच्चै आकाश सफा नै रहेछ, त्यो कार्तिक ३० गतेको दिन ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 4:26 AM 1 comment:
नेपाल टेलिकमले धुन्चेमा नमस्ते मोबाइलको टावरखडा गरेपनि यसको सुरुवात यसै महिनामा अन्य बिधुतीय उपकरण समेत जडान गरि गर्ने बताईएको छ । धुन्चेबाट १० कि मी वरपरको क्षेत्रमा नेटवर्क कभरेज हुनेछ ।मँसिरमा चुनाव नभएपनि रसुवाको सदरमुकाम छेउछाउका जनताले भने मोबाईलको मिस कलको स्वाद थाहा पाउन अब धेरै कुर्नु पर्ने नहोला !
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:55 AM 1 comment:
सुन्दर लाङ्टाङ् हिमाल चुम्ने सपनाको साथमा झन्डै ४००० मीटरको उचाईमा पुगेका शरदले 'हिउभन्दा चिसो ' भन्ने डेनी डेन्जोम्पाको गीतलाई बिर्साउदै ध्यानमग्न मुद्रामा मग्न रहे, ओशो तपोबन सम्झदै हो कि!
ति शरद चिराग नेपाल समाचारपत्र दैनिकको डेस्कका अक्षरसँग खेल्न छोडेर हिउमा लडीबुडी गर्न दशै लगत्तै केन्जिङ् उपत्यका पुगेछन् । यो पर्यटकिय मौसममा आन्तरिक पर्यटक भएर २-४ साथी लिएर २-४ हजार खर्चेर राजधानीबाट १ हप्ताको फुर्सद निकालेर लाङ्टाङ् पदयात्रामा भौतारिनु आफैमा आनन्द हो नै !
के तपाई पनि हातैले हिमाल छुनको लागि अर्को बसन्त रितुको पर्खाईमा त हुनुहुन्न?
शरदको लाङ्टाङ् यात्राका अन्य तस्विरहरुको सँग्रह
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:44 AM5comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:04 AM 1 comment:
तामाङ भाषामा देउसीलाई याये भन्ने चलन छ र यसमा पनि आफ्नै भाषामा आफ्नै भेषमा देउसी खेलेको देख्दा झन रमाईलो लाग्यो ।
गत्लाङ गाउमा घ्याङ् बनाउनको लागि देउसी खेल्दै हिडने यो टोलीले पक्कै पनि सास्क्रितिक रुपमा हामी एक छौ भन्ने सन्देश दिएको छ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:19 AM 1 comment:
काठमाण्डौबाट लगभग १५० कि मी को दुरीमा रहेको रुङगा डाडाको उचाईबाट लाङ्टाङ् हिमाल हेर्ने सपना अलिकति त पुरा हुन्छ नै, गत्लाङ-सोमदाङ्-गणेश् हिमाल , गोल्झुङ् र चिलिमे जाने यो बाटोमा गुडने गाडीहरुले पक्कै पनि पर्यटक बढाउला नि ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 7:30 PM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 7:18 PM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 12:23 AM2comments:
हिमाल चढने सुन्दर सपना बोक्नेहरुको लागि रसुवाको चर्चित् पहिरो मुलखर्कको रुट खुलेको छ , जसबाट पर्यटकहरुको लागि हिमालको हिउले अब स्वागत् गर्न थालिसक्यो ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:21 AM No comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:43 AM3comments:
दुर्गम ठाउको चलन, परम्परा किन बचेको हुन्छ भने देखि यसलाई जोगाएक हुन्छन् केटाकेटीहरुले । उनीहरुको शिर देखी पाईतालासम्म आफ्नै मौलिकपनको भाषा छ । तर यसलाई जोगाउन सरकारले चाहि के गरेको छ नि ? दौरा सुरुवाल र नेपाली टोपीको राग अलापेर मात्र क्षेत्रिय समस्या समाधान होला त ?
अनि यि नानी देखिन्नन् त ! घले राजकुमारी जस्ती ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 12:09 PM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:48 AM2comments:
यो याममा लाङ्टाङ् घुम्न आउने पर्यटकहरु आफ्नो बन्दोबस्त आफै गर्छन्, आफ्नो क्याम्प आफै खडा गर्छन् । यो तस्बिरमा देखिए जस्तै स्याफ्रुको होटेल र लजको मात्र होइन, यो चौरको पनि भाडा लाग्छ ! एक चोटी हेलिकोप्टर बिसाएको रु १,००० मात्र । तर बजारमा बस्न राम्रो ब्यबस्था छ , कहिलेकाही भने आउने सयौ पर्यटकहरुको लामले होटेललाई पनि पछि पारीदिन्छ, अनि सुरु हुन्छ, टेन्टमय चिसो रात, खोलाको किनारमा!!! तर नआतिनुस् यो तस्बिर भने चैत बैशाखको हो ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:23 AM No comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 9:14 AM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 6:51 AM6comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:16 AM2comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:47 AM 1 comment:
१७१ दिन सरकारमा बसेको अनुभवपछि माओबादी पुन्: बाहिरीएर आन्दोलनको मुढमा गएका छन । झण्डै १४ हजार मान्छेको बलिदानपछि आएको शान्तिको यो झिनो आशामा जाडो सुरु नहुदै तुसारापात लाग्न सुरु भएको महसुश भएको छ । चुनाव पछि शान्तिको रट लाउनु पर्ने बेला अब हामी कता भासिने हौ त ! माओबादीले सँबिधानसभाको चुनावमा भाग लिएर शान्तिको आशा जगाईदिए भने , त्यो भन्दा दर्हो प्रतिपक्ष अरु हुन सक्दैन , राष्ट्रिय सुरक्षाको खातिर पनि।
अनि यि एक जोर आखाको भाखालाई बुझ्ने कसले त?
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:35 AM3comments:
खोकीको औषधि बोझोको लटरम्म झाङ् रहेको यो कुण्ड वरिपरि पुग्न गणेश हिमाल जाने त्रिसुलिबाट सोमदाङ् कच्चि सडकको ७४ कि मी अघिको गत्लाङ् गा बि स छेउ पुग्नु पर्छ ।
स्याउको बारी छेउमै रहेकोले पनि काठमाण्डौसँगको यसको सोझो सम्पर्क लगभग १५० कि मी भन्दा कम छ । सस्तो, मिठो स्याउचाहि रुखै चढेर खान पाइयो भने तपाईलाई के को चिन्ता नि ?!!
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:31 AM 1 comment:
चिज कारखानामा होइन् कि बाटोमा लडाएर राखिएको यो चिजको नाम नै चिज हो। दैनिक २०० के जी उत्पादन गर्ने चन्दनबारीको झन्डै ३० बर्ष पुरानो चिज कारखाना हुदै धुन्चेबाट राजधानी पुग्ने ११३ कि मी को सडक खण्डको मुलखर्कमा पहिरो गएकोले भने चिजले पनि भरियाको भारी बन्नुपर्यो । सदरमुकामको बाटो बन्द हुदा पनि सुतिरहेको देशलाई यो चिजले के जगाउन सक्ला त ?
Posted by Reality Bites, Nepal at 12:02 PM 1 comment:
यो तस्बिर मैले कुनै बाध्यताले खिचेको होइन, र कुनै मौका पर्खेर पनि होइन । तर मान्छेको जिवनमा यस्ता क्षणहरु पनि आउने रहेछन कि समयको एक पल वा मुडमा क्यामराको लेन्स आफै खुल्दो रहेछ ।
रसुवा जिल्लाको एक गाउमा खिचिएको यो तस्बिरले मलाई नेपालको गरिबीको रेखामुनी यति प्रतिशत वा उति प्रतिशत भनेर गरिने हिसाबले रिङ्गाए जस्तो लाग्छ अहिले।
यी बालबच्चाहरुलाई लगाउने एकसरो लुगा नभएको अवस्थामा हामी जतिसुकै ठुलो कुरो गरेपनि वास्तबिक नेपाल फरक रहेछ भन्ने महशुस हुदैछ, जबसम्म उनीहरुको शरिरका रेखाहरु ढाक्न प्रयासै हुदैन भने ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:37 AM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 9:44 AM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:26 PM 1 comment:
देशले काचुली फेर्न आटेको बेला अब दुर्गम ठाउहरु पनि सुगम हुने दौडाहामा जाने बेला भएको छ । सँघियताको नाराले राजधानीको अधिकार यस्तै खोला नालाको छेउतिर बाडदा बागमतिलाई त्यति धेरै बोझ पर्ने थिएन् कि ?
Posted by Reality Bites, Nepal at 6:16 AM2comments:
सरकारमा बस्ने मन्त्री तथा देश हाक्ने नेता जनताका हिमायती हुन् भने वातावरण संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन किन लाग्दैनन् ? वातावरण संरक्षण नहुनाले कहिले कुनै ठाउँमा अतिवृष्टि र कहिले कुनै ठाउँमा अनावृष्टि भई सर्वसाधारणले पाउनु दुःख पाइराखेका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि वनजंगलको उचित संरक्षण हुनुपर्छ । विश्वको तापमान वृद्धि घटाउनुपर्छ । भू-संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम देशभर लागू गराउनुपर्छ । वायुमण्डलमा रहेको ओजन तहको विनाश रोक्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत दुरुपयोग र ओजन तह विनाशले विश्वकै पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न गएको छ । बाढीपहिरोको प्रकोप बढ्दो छ ।
तराईमा बाढीको प्रकोप बढ्नुमा अर्को मुख्य कारण हो नेपाली सीमा नजिक बनाएका भारतीय बाँध । तिनलाई भत्काउन वा पुनर्निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ । नदी किनारका भोका मानिसलाई एउटा माछा दिनुभन्दा माछा मार्ने कला सिकाइदिन सकियो भने राम्रो हुन्न र ?
- श्यामसुन्दर श्रेष्ठ
श्रोत कान्तिपुर दैनिक, पाठक पत्र, १९ भाद्र
Posted by Reality Bites, Nepal at 4:47 AM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:17 AM3comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 9:31 AM 1 comment: